Ahlu Baydkii Nabigu Xaaskay Iiga Umuliyeen , Amiir Al-Mu’miniina Raashinkuu noo kariyay. Sheeko Layaab leh. | Shabakada Gabooyaha
Ahlu Baydkii Nabigu Xaaskay Iiga Umuliyeen , Amiir Al-Mu’miniina Raashinkuu noo kariyay. Sheeko Layaab leh.
May 10, 2015 - jawaab
Habeen kamid ah habeenada ayaa Cumar Binu Khadaab ku wareegayay magaalada si uu u xansado oo uu u ogaado xaalada ay ku noolyihiin dadka uu madaxda u yahay, waxa uu arkay teendho waxaanuu ku arkay meel aanuu uga baran, waxa uu u dhaqaaqay meeshii ay ku taallay teendhadu oo uu aqalku ka dhisnaa, markii uu u dhawaaday ayuu maqlay cod kasoo baxay teendhadii wuu usoo dhawaaday , teendhadii dadkii ku jiray ayuu u dhawaaqay oo uu u yeedhay si ay ugu soo baxaan , nin ayaa usoo baxay .
Cumar ayaa waydiiyay :Kumaad tahay ?, waxa uu ugu jawaabay: waxaan ahay nin reer baadiye ah , abaar ayaa nagu dhacday , aniga iyo ehelkaygiiba waan nimi anagoo cumar ka doonayna inaan ka helno kaalmaati iyo gacan qabad, waxaan soo maqalnay inuu Cumar dadka Gacan qabto, dadkana uu u wanaagsan yahay.
Cumar: waa maxay taahaa aan maqlayo ee dhagahayga soo gaadhaya?
Waxa uu ugu jawaabay: waa xaaskayga oo la taahaysa xanuunka foosha.
Cumar: ma haysataa cid ka dhalisa oo Umuliso ma la joogtaa?
Waxa uu ugu jawaabay:Maya!!! Waa iniga iyo iyada oo kaliaya.
Cumar:Oo gabadha waxaad siiso ma u haysaa?
Waxa uu ugu jawaabay: Maya.
Cumar: iyara sug, waxaan keenayaa waxaad cuntaan iyo Umuliso labadaba.
Cumar Binu Khadaab waxa uu dib ugu noqoday gurigiisii , waxaa guriga ku sugnaa xaaskiisa oo ahay Umu Kalthuum bintu Cali binu abii Daalib.
Wuu u yeedhay ;gabadhii labada karaamaysnaa ay iska dhaleeney, ma ka faa’iday sanaysaa khayr Illaahay kuu keenay.
Waxay ugu jawaabtay: Oo Muxuu ahaa ?
Waxa uu ugu jawaabay Cumar:Waxaa meel halkana joogta Miskiin faqiir ah oo ay fooshu hayso.
Waxay ugu jawaabtay: oo ma waxaad doonaysaa inaan howshaa anigu qabto oo aan ka dhaliyo?
Istaag gabadhii ay iska dhaleen labadii karaamaysnayd , waxaanad soo diyaarisaa wixii gabadha umulaysaa u baahnayd, cumar isaguna waxa uu qaaday wixii raashin ahaa isagoo waliba tunkiisa ku xamaalayay.
Waxay yimaadeen meeshii teendhada ahayd, Umu Kathuum waxay u gashay gabadhii fooshu haysay si ay uga dhaliso, Cumar waxa uu la fadhiistay ninkii Albaabka teendhada , isagoo waliba raashinkii karinaya .
Umu Kalthuum ayaa u yeedhay :
Amiirkii Mu’miniintow waxaad u sheegtaa ninka inuu Illaahay wiil siiyay xaaskiisuna caafimaad qabto.
Ninkii marka uu maqlay Amiir al Mu’miniin gadaal ayuu u durkay isagoo layaab ay ku noqotay!!!!!! Muu ogay inuu ahaa Amiirkii Mu’miniinta.
Cumar ayaa ku qoslay , waxa uu ku yidhi soo dhawaw, xaaska waxaa ka umuliyayna waliba waa umu kalthuum gabadhii uu dhalay Cali Binu Abii Daalib.
Ninkii oohin ayuu is hayn kari waayay, Ahlu baydkii nabiga ayaa xaaska iiga umuliyay, Amiir al Mu’miniina isagaa wax u karinaya xaaskayga!!.
Cumar ayaa ku yidhi; Qaado tanna oo waliba intaad nala joogto biilkaaga anagaa kuu keenayna.
Arinkaa Uu sameeyay Sayidinaa Cumar Binu Khadaab waa wadiiqadii ay ka barteen nabi Mux’ed (SCW).